ဓမ္မရသ: “ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ဗေဒင်၊ နက္ခတ်”
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 3.11.08
အင်းဟုတ်ပါတယ် မြတ်စွာဘု၇ားကိုလဲအမိုးအ ကာမ၇ှိဘဲထားတာကိုလဲတွေ.၇တယ် ပီးတော. ဒါတင်မကဘဲအပေါက်ပေါင်းများစွာနဲ.ထွင်းထား တာကိုလဲမြင်၇တာ၇ယ် နွေ မိုး ဆောင်း၇ာသီ ၃ ပါးထဲမှာ၇ပ်နေ၇၇ှာတဲ.မြတ်စွာဘု၇ားကိုမြင်၇ ..တာစိတ်ကိုမကောင်းပါဘူး မြင်လဲမမြင်၇က်ဘူး ကိုယ်တောင်မှ မိုးမိ၇င်နှာဆီးချောင်းဆိုးဖြစ်တာ လေ အကယ်ေ၇ွှ. သက်ရှိထင်၇ှားမြတ်ဘု၇ား....
ဟုတ်ပါတယ် ညီရေ။ နေ့လည်ဖက်ကြီးကို ဘုရားတွေမှာ မီးတွေပူဇော်နေတာဟာ တကယ်တော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ နေရဲ့အပူချိန်၊ ပြီးတော့ ဖယောင်းတိုင်အပူချိန်၊ တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်၊ သက်ရှိဘုရားလို့ စိတ်နှလုံး သွင်းကြည့်။ အလွန်ပူတာပဲလို့ ပြောကြားမှာပါပဲ။ လူတွေက ကိုယ်ကျိုးအတွက်ပဲ လုပ်နေကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ကုသိုလ်ရအောင်ဆိုပြီး ဘာမှ မသိ နားမလည်ဘဲ ထွန်းကြတာပေါ့။ တစ်ချိုကတော့ ဗေဒင် ယတြာတွေပေါ့ ။ တော်တော်ကို အရုပ်ဆိုးလွန်းလှပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေနဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး စဉ်းစား သုံးသပ်စေလိုပါတယ် ။
အယူမှားတာလား... အမှားယူတာလားဆိုတာ ကျွန်တော်လည်း ခွဲခြားမသိတော့ပါဘူးဗျာ။
အင်မတန်မှ ကောင်းမွန်တဲ့ပို့စ်လေးပါဗျာ... သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အရာတွေပါပဲ... ဖြူးဆရာတော် ဦးသူရိယရဲ့ သွေးနဲ့ရေးတဲ့ သာသနာ ကို နာပြီးကတည်းက ဒီအတွေးလေးဝင်မိတယ်ဗျ... ကောင်းတယ်ဗျာ... လေးစားတယ်...
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ၊ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အရာတွေကို
ဘယ်အချိန်ပဲလာလာ ၊ ဘယ်အချိန်ပဲ ပြန်သွားသွား
စိတ်အေးချမ်းမှု အပြည့်အ၀ရှိတယ် ..
အခုတလော ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်အေးချမ်းအောင်
ကောင်းလိုက်တဲ့ post သေသေချာချာလေး ဖတ်သွားတယ်ဗျာ။
မင်္ဂလာပါအောင်ဦးရေ။ နေ့တိုင်းဟာ မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့များမို့ နေ့တိုင်းအစ်မပြောနေကြ စကားလေးဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာပါကို မရိုးတမ်းပြောမှာနော်။ အယူတွေကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့ရာ တစ်ယောက်အားနဲ့ မစွမ်းသာ မျိုးရိ်ုးစဉ်ဆက် ပညာပေးရမှာမို့ အတော် ဆောင်ရွက်ရမဲ့ ကိစ္စပါနော်။ အစဉ်အဆက် သင်ကြားပြသ ပြောကြားပေးမှသာ အယူသည်းမှုနဲ့ အယူဝါဒစွဲလမ်းမှုတွေကို အတော်ချွတ်တဲ့နေရာမှာ မျိုးဆက်သစ်များရော မိဘ ဆွေမျိုးများပါ ၀ိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်ရမှာပါလားလို့ ပိုစ့်ဖတ်အပြီးမှာ စဉ်းစားမိပါတော့တယ်။
ကျန်းမာရွှင်လန်းပြီး သာသနာအကျိုးဆတက်တပိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။